Breaking News: Al-Shabaab oo la sheegay inay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan – SBC
Breaking News: Al-Shabaab oo la sheegay inay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan
Posted by editor on Juun 9, 2011 Comments
Xarakada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qorshenayaan weeraro ay ka gaysteen wadamo dibada ka ah Soomaaliya, sidaasi waxaa sheegay Taliyaha hay’ada sirdoonka Mareykanka ee CIA-da Leon Panetta.
Panetta ayaa la filayaa maanta (waqtiga Mareykanka) uu la hadlo golaha Senate-ka Mareykanka isagoo uga warbixin doona xaaladaha amaanka oo ay ka mid tahay wax uu ku sheegay qatarta soo kordhaysa ee ka imaanaysa Al-Shabaab oo uu ku tilmaamay inay xiriir la leeyihiin Al-Qaacida.
“Qatarta ama hanjabaad ka imaanaysa Al-Shabaab ee ka dhanka ah danaha Mareykanka & Gobolka ee wadamada Geeska Afrika waa mid u baahan in laga taxadaro isla markaana sii kordhaysa” ayuu ku yiri qoraal jawaab ah oo uu madaxda CIA-da uu u gudbiyey gudiga ciidamada ee golaha Senate-ka Ameerikaanka.
Panetta waxaa kulanka maanta uu la yeelanayo golaha Senate-ka gaar ahaan gudiga ciidamada uu si weyn ugu faahfaahin doonaa qatarka ka soo socota Al-Shabaab, iyadoo la aaminsan yahay in ninkan uu u sharaxan yahay in uu badalo xoghayaha difaaca Mareykanka Robert Gates.
“Hogaamiyaasha Al-Shebab waxay ilaa iyo sanadkii 2007-dii sheeganayeen inay la safan yihiin Al-Qaacida, waxaana sii kordhaysa xiriirka ay la yihiin kooxdaasi gaaar ahaan kuwa Jasiirada Carabta, waxay hada (Al-Shabaab) u diyaarsan yihiin inay fuliyaan weeraro dibada ka ah Soomaaliya oo caalamiga ah taasi oo ay ku kordhinayaan falalka colaadeed ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya” ayaa ku xusey qoraalkiisa Panette oo nuqul ka mid ah ay heshay wakaalada wararka ee AFP, qoraalkaasi oo uu maanta u gudbinayo golaha Senate-ka.
Panetta waxaa soo magacaabay 28-kii bishii April Madaxweyne Obama waxaana bishan June 30-keeda uu xilka wasiirka gaashaandhiga Mareykanka uu kala wareegayaa Robert Gates oo hawlgab noqonaya.
“Al-Shabaab waxay adeegsanayaan boqolaal dagaalyahano ajanabi ah waxayna si joogto ah u urursanayaan dhalinyaro Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaan bulshooyinka ku nool Mareykanka & Yurub” ayuu hadalkiisa ku xusey Panette.